आरोप लगाउनेहरूले प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्छ । उनीहरूले महिलाको च्यादर पहिरिनुपर्छ ।
हिजाबमाथि राष्ट्रपतिको टिप्पणी
| मङि्सर १९, २०७४
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले परम्परित हिजाबमाथि आफ्ना टिप्पणीका लागि महिलासित माफी मागेका छन् । राष्ट्रपति असरफ केही सरकारी अधिकारीका स्लामिक स्टेटसित सम्बन्धित आरोपमाथि शनिबार प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए । उनले भनेका थिए कि आरोप लगाउनेहरूले प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्छ । अन्यथा, उनीहरूले महिलाको च्यादर पहिरिनुपर्छ ।
यसपछि अत्यन्त धेरै मानिसले राष्ट्रपतिको यस भनाइलाई यौनिक टिप्पणी मान्दै यसको कडा आलोचना गरेका थिए । पछि राष्ट्रपति घानीले यस टिप्पणीबाट आहत भएका महिलालाई सम्बोधित गर्दै माफी मागे र उनले आफ्नो भनाइ गलत ढंगले बुझिएको बताए ।
अफगानी राष्ट्रपतिको कार्यालयले एक आधिकारिक वक्तव्यमा भनेको छ– राष्ट्रपति महिला अधिकारका प्रखर समर्थक हुन् र उनले आफगानी राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो कार्यकालमा देशका महिलाको स्थिति मजबुत गर्न कैयौँ कदम उठाएका छन् । वक्तव्यमा अगाडि बताइएको छ कि राष्ट्रपतिले ‘च्यादर’ शब्दको उपयोग गरेका थिए, जसको गलत व्याख्या गरिएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ– यो एक आम भनाइ हो, जसको अर्थ महिलामाथि आहत पुर्‍याउनु कुनै हालतमा होइन।
राष्ट्रपति घानीले पारम्परिक हिजाबमाथि आफ्नो विचार राखेर भनाइ टुंग्याउनासाथ सुन्नेजति सबैले ताली बजाएका थिए । तर, त्यसको एक दिनपछि उनले माफी माग्नुपर्‍यो । कैयौँ मानिसको भनाइ छ कि घानी आफ्ना आलोचकलाई महिला बन्ने सल्लाह दिँदै यस्तो संकेत दिइरहेका थिए कि महिला हीन हुन्छन् ।
सिभिल सोसाइटीका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति घानीको कडा आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रपति घानीले माफी माग्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठाएका थिए । केही सरकारी अधिकारी तथा महिला सांसदले पनि राष्ट्रपतिको यस भनाइमाथि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
महत्वपूर्ण सन्दर्भ यो हो कि अफगानिस्तान एक मुस्लिमबहुल देश हो, जहाँ अधिकांश महिलाले हिजाब लगाउँछन् ।
कसमाथि विश्वास गर्नु ?
अफगानिस्तानमा महिला लेखकलाई सहयोग गर्दै आएको संस्था ‘फ्री उमन राइटर्स’ ले राष्ट्रपति घानीको भनाइमाथि फेसबुकमा जवाफ पनि लेखेको थियो । सो संस्थाले राष्ट्रपतिजस्ता सम्मानित व्यक्तिबाट यस्ता टिप्पणी आउँछन् भने अफगानी महिलाले कसमाथि विश्वास गर्नु ? राष्ट्रपतिले यस्तो सोच्नु आममहिलाका लागि लज्जाको विषय हो ।
महिला सांसद फौजिया कुफीले ट्विट गरेकी थिइन् कि उनलाई हिजाब लगाउँदा गर्वको अनुभव हुन्छ । राष्ट्रपति घानीले ०१४ मा अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिएका थिए । शपथसँगै उनले भ्रष्टाचारसित कडाइसाथ प्रस्तुत हुने बाचा गरेका थिए । राष्ट्रपति बन्नुअघि घानी देशका अर्थमन्त्री रहेका थिए भने उनले विश्वबैंकका लागि पनि काम गरेका थिए ।
बिबिसी हिन्दीको समाचार टिप्पणी